Mudane ka tirsan G. Wakiilada oo shaaciyay xogo ku duugan baadhista Kiis dhegaysigiisu bilaabmay | Somaliland.Org
March 29, 2010	Hargeysa (Somaliland.Org)- Xildhibaan Maxamed Jaamac Cali oo ka tirsan Goloha Wakiillada Somaliland, isla markaana laga soo doortay Gobolka Togdheer kana mid ah Mudanayaasha Xisbiga Mucaaridka ah ee UCID, ayaa ka waramay tallaabooyinka baadhitaanka dilka Taliyihii qaybta 12-aad ee Ciidamada Qaranka oo 1-dii bishii 11-aad 2009 lagu dilay Qarax Miino magaalada Laascaanood ee xarunta Gobolka Sool iyo heerarkii kala duwanaa ee ay baadhista Kiiskaasi soo martay, waxaanu masuuliyiin Xukuumadda ka tirsan ku eedeeyay inay u guntadeen sidii loo dedi lahaa xaqiiqada Kiiskaas.
Warsaxaafadeed uu Xildhibaanku soo saaray oo uu kaga hadlayo arrimo badna o kale duwan, isla markaaana daaha ka rogaya xogo kala duwan, ayaa wuxuu u dhignaa sidan;
“Maanta (shalay) oo ay ahayd maalin Axad ah, 28-ka March 2010, Degmada Mandheera waxa ka furmay dacwadda 9 qof oo lagu soo eedeeyey dilka Allah ha u naxariistee Cismaan Yuusuf Nuur oo ahaa Taliyahii hore ee Qaybta 12 ee Ciidamada Qaranka Somaliland ee Goolka Sool. Sida aan ka wada dhegaysannay Laanta Af Somaaliga ee BBC-da, waxa halkaa ku sugnaa ilaa 50 qof oo danahooda uga soo boqoolay si ay taageero macnawi ah iyo mid maaddi ah ugu fidiyaan eedaysanayaasha.
-03/01/2010 Waxaa la qarxiyey saldhigii dhexe halkaas oo saddex askari ku dhaawacmeen. Dhaawaca oo loo qaaday G/togdheer, ayaan darro, waxaa dhaawacii ku geeriyooday laba ka mid ah halka kii saddexaad weli ku sugan yahay cisbitaalka Burco.
-10/01/2010 fiidkii waxa toogasho lagu dilay taliyanii hawlgelintu ee ciidanka booliska G/Sool, marxuum Cismaan Macallin Nuur oo sida la sheegay ku gudo jiray baadhitaankii qaraxyadii toddobaad ka hor ka dhacay saldhiga booliska.
-18/02/2010 Taliyihii Saldhigga qaraxu ka dhacay ayaa ka kacay masaajid ku yaalla Laascaanood isaga oo sheegay falalkii ka dhacay magaalada in uu ka danbeeyey Taliyaha Booliska ee Qaybta G/Sool, isla markaana sheegay in uu tuhunsan yahay isaga laftiisa in la rabo in la dilo si loo lumiyo fulinta cadaaladda iyo soo afjaridda qaraxyada socda.
-18/02/2010 Isla habeenkaa Taliyaha Saldhiggu waxa uu idaacadaha maxaliga ah ee Gobolka ku faafiyey eedayntaa isagoo ku celiyey in uu ka baqayo in la dilo iyo in uu caddeynayo falalkii hore u dhacay iyo haddii isaga dhib soo gaadho in uu masuul ka yahay taliyahiisa qaybta gobolku. Inkastoo xukuumadda laga filayey inay soo fara geliyaan arrintaas ka soo yeedhay Taliyahii Saldhigga Dhexe ee Laascaanood, isla markaana la filayey in uu eedda iska reebo taliyaha qaybtu, waxa nasiib darro ah in xukuumaddu arrinkaas dhegaha ka xidheen. Ilaa hadda, Qaybtii Booliska ee Gobolka waxa taliye ka ah ninkii masaajidyada iyo warbaahinta laga eedeeyey isagoo loo aaneeyey dhammaan fal denbiyeedyadii dhowaanhan laga fuliyey Laascaanood.
·Wefdi balaadhan oo leh wasiiro, xildhibaano iyo siyaasiyiin ayaa dhowaan u baqoolay Laascaanood iyagoo sida aan warka ku haynno qaarkood la kulmeen Taliyihii Saldhigga Dhexe oo sida la sheegay ka codsadeen in uu ka noqdo eedaymihii uu sheegay iyo inuu xilka iska casilo si loo denbabaso runta iyo xaqiiqada ka jirta Laascaanood.
·25/01/2010 Taliyahii Saldhigga Dhexe ee Laascaanood ayaa idaacadaha ka sheegay in uu iska casilay xilkii uu ummadda u hayey. Waxaa la qabaa ergadii xukuumadda ee halka ka tegay in ay taliyaha ku qasbeen xil ka tegista si loo aamusiyo codkaa soo yeedhay oo la filayey inuu daahfuro arrinta murugsan ee G/Sool. Sidoo kale, waxa muuqata taliyahu inuu ku qanci karo markuu ogaaday mawqifka xukuumadda iyo in uu isagu noqday nin u ergoonaya kii eelka dhigay.
·20/01/2010 waxaa isna warbaahinta la sheegay in uu is casilay taliyahii ciidanka denbi baadhist (CID) isagoo warbaahinta ka sheegay in uu gacanta ku hayey gal denbiyeedka dilkii T/Q/12aad Cismaan Yuusuf Nuur.
·26/01/2010 Mar kale, qarax ay ku dhinteen saddex askari, mid kalena dhaawac culusi ka soo gaadhay ayaa ka dhacay magaaladda laascaanood.
·27/01/2010 Waxa la sheegay guryaha maayarka iyo taliyaha Q/booliska in hortooda la dhigay joonyado loo maleeyey in ay ku jiraan walxaha qarxa. Baadhitaan qaatay maalintii oo dhan ka dib waxaa la oggaday joonyadahu in ay ka buuxaan ciid iyo xashiish.
- 29/01/2010 Qarax xooggan ayaa lala beegsaday badhasaabkii G/Sool halkaas oo badhasaabka dhaawac ka soo gaadhey isaga iyo dareewalkiisa. Allah ha u naxariistee shilkaas waxa ku nin ka mid ahaa ilaalidii badhasaabka.
·02/02/2010 Qarax xooggan ayaa ka dhacay agagaarka Huteelka Xamdi halkaas oo uu ka socday shir. Sida la sheegay subaxnimadii waxa goobtii laga helay nin lagu tilmaamay in uu ka danbeeyey qaraxa.
·Mudaaharaadyo culus ayaa oogsamay magaalda Laascaanood iyadoo isla maalintii bannaanbaxo uu ku qudh baxay hal qof (nin) laguna xidhxidhay in ka badan 60 qpf oo loo soo dhaadhiciyey magaalada Caynabo halkaas oo aanay ka jirin adeeg lagu sugi karo daryeelka iyo nabadgelyada tirade intaas lee gee maxaabiista ah.
·07/02/2010 Wasiirkii Cadaaladda iyo siyaasiga Axmed Cabdi Xaabsade ayaa xabsiga G/sool si fool ka fool ah ugu la kulmay eedaysane Taliyahii Nabadsugidda Gobolka iyo dad kale oo u xidhan dilkii Taliyaha Q/12aad iyo falalkii argagaxiso ee la xidhiidhay.
·10/02/2010 Mar labaad ayaa wasiirkii cadaaladda iyo Xaabsade la kulmeen maxaabiistii iyadoo sida la sheegay ay is afdhaafeen ilaaladii xabsiga. Waxa ayaan darro weyn ah on uu cadaaladii marin habaabinayo wasiirkii cadaaladda oo u xilsaarnaa.
Ergadayada xaqiiqo raadiska ah waxaannu 04/11/09 booqannay goobtii uu shilku ka dhacay halkaasna waxaannu ku la kulannay dad goob joog ahaa. Isla maalintaas waxaannu la kulanney wefti balaadhan oo uu hoggaaminayey Wasiirka Gaashaandhigga kana mid ahaa Taliyaha Ciidanka Qaranka. Waftiga oo ka soo socdaalay Hargeysa waxay noo sheegeen hawsha baadhitaanku in ay u taallo xukuumadda iyo maamulka gobolka Sool.
1-Hay’adaha xeerdejinta ee qaranka, si loo soo sugo xogta dhabta ah, waxaan hore uga codsanay, mar kalena aan ku celinaynaa in guddi heer qaran ah loo saaro baadhitaanka shirqoolada qorshaysan ee ka ooggan magaalada Laascaanood.
3-Waxaan xukuumadda u soo jeedinaynaa in tallaabo sharci ah laga qaado wasiirkii arimaha gudaha oo tan iyo markii shilku dhacay warbaahinta ku faafinayay hadalo is burinaya oo uu ku marin habaabinayo xaqiiqada isagoo u soo saftay difaacidda iyo eed ka reebidda eedaysanayaasha.
4-In sida ugu dhaqsaha badan loo fuliyo go’aankii xeer ilaalinta iyo maxkamadda sare oo u qorshaysnaa in si degdeg ah dacwadda loogu qaado goob iyo garsoor ku habboon.
5-In baadhitaab buuxa lagu sameeyo madaxda xukuumadda iyo siyaasiyiinta xabsiga ku la kulmay eedaysanayaasha. Isla markaana, maxkamad la hor keeno madaxda xukuumadda ee lagu tuhunsan yahay in ay ka qayb qaateen shirqoolada qorshaysan.
6-Salaadiinta, cuqaasha iyo waxgaradka somaaliland waxaan ka codsanaynaa in u kacaan siddii loo furdaamin lahaa, nabadna loogu soo dabaalilahaa Gobolkaas iyo dhamaan soomaalilandba.
7-Bulshada caalamka iyo ururada u dooda xuquuqda aadamiga waxaan ka codsanaynaa in gacan naga siiyaan baadhitaanka falalka argagaxiso ee ka aloosan Gobolka Sool oo haddii la sii eegto ku sii faafi kara dalka intiisa kale.”
Previous PostWararkii u dambeeyay ee Rag qaarkood Ajaanib yihiin oo Maxkamad loo saaray eedo ArgagixisanimoNext PostSoo dhaweyntii wafdiga udub ee Minnesota	Blog